အင်ဒီယာဂန္ဒီသည် 1980 နှစ်များအစောပိုင်းတွင်အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ယင်းသြဇာ၏ကြီးထွားလာသောပါဝါကိုကွောကျရှံ့ ဆစ်ခ် တရားဟောဆရာများနှင့်စစ်သွေးကြွ Jarnail Singh က Bhindranwale ။ 1970 နှောင်းပိုင်းနှင့် 1980 နှစ်များအစောပိုင်းတွင်တစ်လျှောက်လုံးလူမျိုးရေးတင်းမာမှုနှင့်ခိုက်ရန်ဆစ်ခ်နှင့်အကြားကြီးထွားလာခဲ့ ဟိန္ဒူ အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်း၌တည်၏။
1983 ခုနှစ်, ဆစ်ခ်ခေါင်းဆောင် Bhindranwale နှင့်သူ၏လက်နက်ကိုင်နောက်လိုက်သန့်ရှင်းဒုတိယ-အလွန်သန့်ရှင်းသောအဆောက်အဦးကိုသိမ်းပိုက်ခြင်းနှင့်ခိုင်ခံ့သော ရွှေဗိမာန်တော် Amritsar, အိန္ဒိယပန်ဂျပ် (ကိုလည်း Harmandir Sahib သို့မဟုတ် Darbar Sahib ခေါ်) ရှုပ်ထွေးသော။
အဆိုပါ Akhal Takt အဆောက်အဦမှာသူတို့ရဲ့အနေအထားကနေ, Bhindranwale နှင့်သူ၏နောက်လိုက်များဟိန္ဒူလွှမ်းမိုးမှုကိုမှလက်နက်ကိုင်ခုခံဘို့ကိုခေါ်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဇာတိမြေ, အပန်ဂျပ်, အကြားအပိုင်းပိုင်းခွဲခဲ့စိတ်ဆိုးခဲ့ကြ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဟာ 1947 ခုနှစ်မှာနှင့်ပါကစ္စတန် အိန္ဒိယ Partition ခွဲ ။
ပိုဆိုးတာကဖို့, အိန္ဒိယပန်ဂျပ်အဘိဓါန်ဟိန်ဒီစပီကာကလွှမ်းမိုးခဲ့သည့် Haryana ပြည်နယ်, ဖွဲ့စည်းရန်တခါပိုပြီး 1966 ခုနှစ်တွင်ဝက်အတွင်း lopped ခဲ့သညျ။ ပနျခြာပီမှလာဟိုးမှာသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးမြို့တော်ကိုဆုံးရှုံး ပါကစ္စတန် 1947 ခုနှစ်, Chandigarh မှာအသစ်-built မြို့တော်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအကြာ Haryana တက်အဆုံးသတ်နှင့်ဒေလီမှာရှိတဲ့အစိုးရ Haryana နှင့်ပန်ဂျပ်ရိုးရှင်းစွာမြို့ဝေမျှဖို့ရှိသည်မယ်လို့စီရင်ဆုံးဖြတ်။ ဤအအမှား, Khalistan ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရဖို့လုံးဝအသစ်သီးခြားဆစ်ခ်လူမျိုးကိုခေါ် Bhindranwale ရဲ့နောက်လိုက်အချို့ညာဘက်ရန်။
ဒေသတွင်း၌တင်းမာမှုများ 1984 ဇွန်လအသုံးပြုပုံအင်ဒီယာဂန္ဒီအရေးယူဖို့ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်မြင့်မားသောစိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ သူမသည်ဖြစ်တဲ့ Fatal ရွေးချယ်မှုလုပ် - ရွှေဘုရားကျောင်းထဲမှာဆစ်ခ်စစ်သွေးကြွဆန့်ကျင်အိန္ဒိယကြည်းတပ်အတွက်ပို့ပေးရန် ...
အင်ဒီယာဂန္ဒီ Allahabad (ကျြမှောကျခတျေ Uttar Pradesh ပြည်နယ်အတွက်) အတွက်နိုဝင်ဘာလ 19, 1917 ရက်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည် ဗြိတိသျှအိန္ဒိယ ။ သူမ၏ဖခင်ခဲ့ ဂျဝါဟာလာနေရူး ဗြိတိန်နိုင်ငံအနေဖြင့်ယင်း၏လွတ်လပ်ရေးအောက်ပါအိန္ဒိယ၏ပထမဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာမှပေါ်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့သူ, ကလေးရောက်ရှိလာသည့်အခါသူမ၏မိခင်, Kamala နေရူးရုံ 18 နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။
အဆိုပါကလေးသည်အင်ဒီရာ Priyadarshini နေရူးအမည်ရှိခဲ့သည်။
အင်ဒီရာတစ်ခုသာကလေးကအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။ 1924 ၏နိုဝင်ဘာလအတွင်းမွေးဖွားတစ်ဦးကကလေးငယ်ကိုအစ်ကိုပဲနှစ်ရက်အကြာတွင်သေဆုံးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါနေရူးမိသားစုအချိန် anti-ဧကရာဇ်နိုင်ငံရေးမှာအလွန်တက်ကြွရှိ၏ အင်ဒီရာရဲ့အဖေဟာအမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှု၏ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအနီးကပ်တွဲဖက်ခဲ့ Mohandas ဂန္ဒီ နှင့် မိုဟာမက်အလီ Jinnah ။
မတ်လ 1930 ခုနှစ်, Kamala နှင့်အင်ဒီရာဟာ Ewing ခရစ်ယာန်ကောလိပ်၏အပြင်ဘက်တွင်ဆန္ဒပြချီတက်ခဲ့ကြသည်။ အင်ဒီရာရဲ့အမေအပူ-လေဖြတ်ခြင်းမှခံစားခဲ့ရ, ဒါ Feroz ဂန္ဒီအမည်ရှိလူငယ်တစ်ဦးကျောင်းသားသူမ၏အကူအညီမှတဟုန်တည်းပြေး။ သူကပထမဦးဆုံးအိန္ဒိယနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ, escorting နှင့်အဆုတ်များအတွက်သူမ၏ဆေးကုနေစဉ်သူမ၏တက်ရောက်ခြင်း, Kamala ၏ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ အင်ဒီရာလည်းသူမ၏မိခင် 1936 ၏ဖေဖော်ဝါရီလတီဘီသေဆုံးဘယ်မှာဆွစ်ဇာလန်အတွက်အချိန်သုံးစွဲခဲ့သည်။
အင်ဒီရာသူမက Somerville ကောလိပ်, အောက်စ်ဖို့မှာစာရင်းသွင်းရှိရာ, 1937 ခုနှစ်တွင်ဗြိတိန်နိုင်ငံကမှသွားဘဲ, သူမ၏ဒီဂရီပြီးစီးခဲ့ဘယ်တော့မှမ။ အဲဒီမှာနေစဉ်, သူမကထို့နောက်လန်ဒန်ကျောင်းစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား Feroz ဂန္ဒီနှင့်အတူပိုပြီးအချိန်ဖြုန်းတော့တယ်။ သူ့သား-In-ဥပဒမကြိုက်သူကိုဂျဝါဟာလာနေရူး၏ကန့်ကွက်ကျော် 1942 ခုနှစ်တွင်လက်ထပ်နှစ်ခု, ။ (Feroz ဂန္ဒီ Mohandas ဂန္ဒီမရှိနှင့်စပ်လျဉ်းခဲ့သည်။ )
Feroz နှင့် အင်ဒီယာဂန္ဒီ 1946 ခုနှစ်တွင်ဖွားမြင်သားနှစ်ယောက်, 1944 တှငျမှေးဖှားရာဂျစ်, နှင့် Sanjay, ရှိခဲ့ပါတယ်။
အစောပိုင်း 1950 စဉ်အတွင်းအင်ဒီရာဝန်ကြီးချုပ်ထို့နောက်သူမ၏ဖခင်တစ်ဦးတရားမဝင်ကိုယ်ရေးလက်ထောက်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ 1955 ခုနှစ်မှာသူမဟာကွန်ဂရက်ပါတီရဲ့အလုပ်လုပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်; လေးနှစ်အတွင်းမှာသူမဟာကြောင်းကိုယ်ခန္ဓာ၏သမ္မတဖြစ်လိမ့်မည်။
အင်ဒီရာနဲ့နေရူးတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြည်နယ်ခရီးစဉ်ဘူတန်ရှိကြ၏စဉ် Feroz ဂန္ဒီ, 1958 တွင်နှလုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရသည်။ အင်ဒီရာသူ့ကိုဂရုစိုက်ဖို့သို့ပြန်သွားကြ၏။ Feroz ဒုတိယနှလုံးတိုက်ခိုက်မှုခံစားနေရပြီးပြီးနောက် 1960 ခုနှစ်တွင်ဒေလီ၌သေကြ၏။
အင်ဒီရာရဲ့အဖေလည်း 1964 ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့ခြင်းနှင့် Lal Bahadur Shastri နေဖြင့်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ဆက်ခံခဲ့သည်။ Shastri အင်ဒီယာဂန္ဒီသတင်းအချက်အလက်နှင့်အသံလွှင့်သူ၏ဝန်ကြီးခန့်အပ်တာဝန်; အပြင်သူမကပါလီမန်အထက်လွှတ်တော်သည် Rajya ဆာဘား၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။
1966 ခုနှစ်မှာဝန်ကြီးချုပ် Shastri မမျှော်လင့်ဘဲသေဆုံးခဲ့ပါသည်။ အင်ဒီယာဂန္ဒီတစ်ဦးအပေးအယူကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်အသစ်ကဝန်ကြီးချုပ်အမည်ရှိခဲ့သည်။ ကွန်ဂရက်ပါတီအတွင်းနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသွေးခွဲနှစ်ဖက်စလုံးအပေါ်နိုင်ငံရေးသမားများသူမ၏ထိန်းချုပ်နိုင်စေဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ သူတို့ကလုံးဝနေရူးရဲ့သမီးလျှော့တွက်ခဲ့သည်။
1966 အသုံးပြုပုံကွန်ဂရက်ပါတီဒုက္ခ၌ရှိ၏။ ဒါဟာနှစ်ဦးကိုသီးခြားအုပ်စုသို့ခွဲဝေခဲ့ပါတယ်; အင်ဒီယာဂန္ဒီလက်ဝဲ-တောင်ပံဆိုရှယ်လစ်အဖွဲ့ခွဲဦးဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ 1967 ရွေးကောက်ပွဲသံသရာပါတီများအတွက်ရင်လေးဖွယ်ခဲ့ - ကပါလီမန်၏အောက်လွှတ်တော်အတွက်ခ်ဆာဘားလွှတ်တော်နီးပါး 60 ထိုင်ခုံဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ အင်ဒီရာအိန္ဒိယကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့်ဆိုရှယ်လစ်ပါတီများနှင့်အတူတစ်ဦးညွန့်ပေါင်းကနေတဆင့်ဝန်ကြီးချုပ်ထိုင်ခုံကိုစောင့်ရှောက်ရန်နိုင်ခဲ့သည်။ 1969 ခုနှစ်တွင်အိန္ဒိယအမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီကောငျးကြိုးအတှကျဝက်အတွင်းကွဲ။
ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်, အင်ဒီရာအချို့လူကြိုက်များရွေ့လျားဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူမသည်တစ်ဦး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလုပ်ပိုင်ခွင့် နျူကလီးယားလက်နက်များ ကြောင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖို့ဖြစ်ကောင်းလည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့ချစ်ကြည်ရေးညှိပေးရ (အိန္ဒိယ 1974 ခုနှစ်တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဗုံးစမ်းသပ်မည်ဟု) 1967 ခုနှစ် Lop Nur မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အောင်မြင်သောစမ်းသပ်တုံ့ပြန်အစီအစဉ်နှင့် အမေရိကန်သမ္မတနှင့်အတူ antipathy ရစ်ချတ်နစ်ဆင် သူမကဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုနှင့်အတူတစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာဆက်ဆံရေးဟာအတု။
သူနှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်းခုနှစ်တွင် ဆိုရှယ်လစ် အခြေခံမူ, အင်ဒီရာဟာသူတို့ရဲ့အခွင့်ထူးအဖြစ်၎င်းတို့၏ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူဝေးလုပ်နေတာ, အိန္ဒိယရဲ့အမျိုးမျိုးသောပြည်နယ်များ၏ Maharaja ဖျက်သိမ်း။ သူမလည်းအဖြစ်ကောင်းစွာမြှုပ်မိုင်းများနှင့်ရေနံကုမ္ပဏီအဖြစ် 1969 ဇူလိုင်လအတွက်ဘဏ်များပြည်သူပိုင်။ သူမ၏သာသနာတော်ကိုလက်အောက်တွင်အစဉ်အလာအစာခေါင်းပါးသောအခါ-ကျရောက်နေတဲ့အိန္ဒိယတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည် အစိမ်းရောင်တော်လှန်ရေး အမှန်တကယ်အစောပိုင်း 1970 အားဖြင့်ဂျုံ, ဆန်နှင့်အခြားသီးနှံများကိုတစ်ဦးပိုလျှံတင်ပို့, အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်။
1971 ခုနှစ်တွင်အရှေ့ပါကစ္စတန်ကနေဒုက္ခသည်တစ်ဦးရေလွှမ်းမိုးတုံ့ပြန်အတွက်အင်ဒီရာပါကစ္စတန်ဆန့်ကျင်တဲ့စစ်ပွဲစတင်ခဲ့သည်။ အရှေ့အိန္ဒိယ / ပါကစ္စတန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လူမြိုး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ရရှိလာတဲ့, စစ်ပွဲအနိုင်ရ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အရှေ့ပါကစ္စတန်ခဲ့သောအရာကိုမှ။
1972 ခုနှစ်တွင်အင်ဒီယာဂန္ဒီရဲ့ပါတီပါကစ္စတန်၏ရှုံးနိမ့်ခြင်းနှင့် Garibi Hatao, ဒါမှမဟုတ်၏ဆောင်ပုဒ်အပေါ်အခြေခံပြီးအမျိုးသားရေးပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲတွင်အောင်ပွဲခံဖို့မျော "ပပျောက်ရေးဆင်းရဲမွဲတေမှု။ " သူမ၏ပြိုင်ဘက်, ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ Raj Narain, အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများနှင့်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာသျောလှဲချြောနှင့်အတူသူမ၏ပညတ်တော်မူ၏။ 1975 ခုနှစ်ဇွန်လမှာတော့ Allahabad အတွက်တရားရုံးချုပ် Narain များအတွက်အုပ်ချုပ်; အင်ဒီရာပါလီမန်တွင်သူမ၏ထိုင်ခုံ၏ချွတ်ခြောက်နှစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရုံးကနေပိတ်ပင်ပြီသငျ့သညျ။
သို့သော်အင်ဒီယာဂန္ဒီဟာစီရင်ချက်အောက်ပါကျယ်ပြန့်ပွားမတည်ငြိမ်မှုရှိနေသော်လည်းအဓိက ministership ကနေဆင်းပေးဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ အဲဒီအစားသူမသမ္မတအိန္ဒိယတွင်အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာခဲ့သည်။
အရေးပေါ်အခြေအနေစဉ်အတွင်းအင်ဒီရာအာဏာရှင်အပြောင်းအလဲများဆက်တိုက်စတင်ခဲ့သည်။ သူမသည်နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများဖမ်းဆီးနှင့်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချ, သူမ၏နိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်များ၏အမျိုးသားရေးနှင့်ပြည်နယ်အစိုးရများပြေတတ်။ ထိန်းချုပ်ဖို့ လူဦးရေတိုးတက်မှုနှုန်း သူမကဆင်းရဲနွမ်းပါးယောက်ျားအတင်းအဓမ္မ vasectomies (မကြာခဏ appallingly ထဲမှာရှိတဲ့အောက်မှာ) အားအကြောင်းမဲ့ခဲ့ပြီးသောအောက်မှာအတင်းအဓမ္မပိုးသတ်, တစ်ဦးမူဝါဒကထူထောင်။ အင်ဒီရာရဲ့အသားအငယျ Sanjay ဒေလီဝန်းကျင်ရှိကျူးကျော်ရပ်ကွက်ကိုရှင်းလင်းမယ့်အပြောင်းအရွေ့ဦးဆောင်; လူရာပေါင်းများစွာသေဆုံးပြီးနှင့်၎င်းတို့၏နေအိမ်များဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်သည့်အခါထောင်ပေါင်းများစွာအိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
အဓိက miscalculation ခုနှစ်, အင်ဒီယာဂန္ဒီမတ်လ 1977 ခုနှစ်မှာအသစ်သောရွေးကောက်ပွဲများတောင်းဆိုခဲ့သည်။
သူမသည်အိန္ဒိယကိုလူသူမ၏ခစျြတျောမူနှင့်အရေးပေါ်များ၏နှစ်ပေါင်းကြာပြည်နယ်စဉ်အတွင်းသူမ၏လုပ်ရပ်များ၏အတည်ပြုကြောင်းသူ့ကိုယ်သူလာအောင်, သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ဝါဒဖြန့်ယုံကြည်ဖို့စတင်ကြပေမည်။ သူမ၏ပါတီဒီမိုကရေစီသို့မဟုတ်အာဏာရှင်စနစ်အကြားရွေးချယ်မှုအဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲပစ်သော, အ Janata Party အားဖြင့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ trounced ခဲ့ပါတယ်နှင့်အင်ဒီရာရုံးထားခဲ့တယ်။
1977 ၏အောက်တိုဘာလအတွက်, အင်ဒီယာဂန္ဒီအရာရှိတဦးကအကျင့်ပျက်ခြစားမှုများအတွက်အကျဉ်းချုံးအကျဉ်းချခဲ့သည်။ သူမသည်တူညီသောစွဲချက်အပေါ် 1978 ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ၌နောက်တဖန်အဖမ်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် Janata Party ရုန်းကန်နေခဲ့ရသည်။ လေးယောက်ယခင်အတိုက်အခံပါတီများ၏တစ်ဦးက cobbled-အတူတကွညွန့်ပေါင်းကတိုင်းပြည်များအတွက်သင်တန်းအပေါ်သဘောတူခြင်းနှင့်အနည်းငယ်သာပြည့်စုံနိုင်ဘူး။
1980 ခုနှစ်အားဖြင့်, အိန္ဒိယ၏လူများတို့သည် ineffectual Janata Party ၏အလုံအလောက်ခဲ့လေသည်။ သူတို့ဟာ၏ဆောင်ပုဒ်အောက်တွင်အင်ဒီယာဂန္ဒီရဲ့ကွန်ဂရက်ပါတီတင်မြှောက် "တည်ငြိမ်ရေး။ " အင်ဒီရာဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်အဖြစ်သူမ၏စတုတ္ထသက်တမ်းထပ်မံပါဝါကိုယူ။ သို့သော်သူမ၏အောင်မြင်မှုသူမ၏သား Sanjay, အဲဒီနှစ်ဇွန်လအတွက်လေယာဉ်ပျက်ကျမှုအတွက်သိသာအမွေခံ၏အသေခံခြင်းအားဖြင့်လည်းစိတ်မလန်းခဲ့ပါတယ်။
1982 အသုံးပြုပုံမကျေနပ်မှုများနှင့်ပင်လုံးလုံးလြားလြားခွဲထွက်ရေးဝါဒ၏မြည်အားလုံးအိန္ဒိယကျော်ထွက်ခြိုးဖောကျခဲ့သညျ။ Andhra Pradesh များတွင်အလယ်ပိုင်းအရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်း, (ကုန်းတွင်းပိုင်း 40% ပါဝင်သော) ကို Telangana ဒေသဝေးပြည်နယ်၏ကျန်ကနေကိုချိုးဖျက်ချင်တယ်။ ဒုက္ခကိုလည်းအစဉ်အဆက်-မတည်ငြိမ်သော Jammu နှင့်အလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့သည်ဟု ကက်ရှမီးယား မြောက်ဘက်တွင်ဒေသ။ အများဆုံးလေးနက်ခြိမ်းခြောက်မှုသျော Jarnail Singh က Bhindranwale ဦးဆောင်သောပန်ဂျပ်ရှိဆစ်ခ်ခွဲထွက်ရေးထံမှလာ၏။
ဤကာလအတွင်းဆစ်ခ်အစွန်းရောက်ဟိန္ဒူနှင့်ပန်ဂျပ်အတွက်အလယ်အလတ်ဆစ်ခ်ဆန့်ကျင်ကြောက်မက်ဘွယ်သောအများ၏မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆင်နွဲခဲ့ကြသည်။ Bhindranwale နှင့်အကြီးအကျယ်လက်နက်ကိုင်စစ်သွေးကြွသူ၏အောက်ပါပု Akhal Takt, ရွှေဘုရားကျောင်းသူ့ဟာသူပြီးနောက်ဒုတိယ-အလွန်သန့်ရှင်းသောအဆောက်အဦ၌ထ holed ။ အဆိုပါခေါင်းဆောင်ကိုယ်တော်တိုင်သေချာပေါက် Khalistan ၏ဖန်တီးမှုတောင်းဆိုမခံ, အစားသူပန်ဂျပ်အတွင်းဆစ်ခ်အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ပေါင်းစည်းရေးနှင့်သန့်စင်ဘို့ကိုခေါ်ရသော Anandpur ဆုံးဖြတ်ချက်၏အကောင်အထည်ဖော်မှုတောင်းဆိုခဲ့သည်။
အင်ဒီယာဂန္ဒီ Bhindranwale ဖမ်းယူသို့မဟုတ်သတ်ပစ်ရန်အဆောက်အဦးတစ်ခုတိုကျရိုကျချေမှုန်းရေးအပေါ်အိန္ဒိယကြည်းတပ်ပေးပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သူမသည်ဇွန်လ 3rd (ရွှေဘုရားကျောင်းရဲ့တည်ထောင်သူ၏အာဇာနည်ဂုဏ်ပြုခြင်း) သည်အရေးအပါဆုံးဆစ်ခ်အားလပ်ရက်ခဲ့သော်လည်းဇွန်လ 1984 ရဲ့အစမှာတိုက်ခိုက်မှုအမိန့်များနှင့်ရှုပ်ထွေးအပြစ်မဲ့ဘုရားဖူးပြည့်စုံလေ၏။ စိတ်ဝင်စားစရာကြောင့်အိန္ဒိယကြည်းတပ်အတွက်လေးလံသောဆစ်ခ်ရှိနေခြင်း, တိုက်ခိုက်မှုကိုအင်အားစုများ၏တပ်မှူးဗိုလ်မှူးအထွေထွေ Kuldip Singh က Brar ငှါ၎င်း, စစ်တပ်များအများအပြားကိုလည်းဆစ်ခ်ခဲ့ကြသည်။
တိုက်ခိုက်မှုများအတွက်ပြင်ဆင်မှုမှာပန်ဂျပ်မှဆက်သွယ်ရေးအားလုံးလျှပ်စစ်နှင့်လိုင်းများကိုပယ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဇွန်လ3ရက်နေ့တွင်စစ်တပ်ကစစ်ရေးမော်တော်ယာဉ်များနှင့်တင့်ကားနှင့်အတူဗိမာန်တော်၌ရှုပ်ထွေးဝိုင်းရံ။ ဇွန်လ5၏အစောပိုင်းနံနက်နာရီမှာတော့သူတို့ကတိုက်ခိုက်မှုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ တာဝန်ရှိသူတဦးကအိန္ဒိယအစိုးရကိန်းဂဏန်းများအရ, 492 အရပ်သား 83 အိန္ဒိယကြည်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အတူ, အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများအပါအဝင်သေဆုံးခဲ့သည်။ ဆေးရုံလုပ်သားများနှင့်မျက်မြင်သက်သေများကနေအခြားအခန့်မှန်းချက်ထက်ပိုမို 2,000 အရပ်သား bloodbath ဖြင့်သေသောဖော်ပြ။
အသတ်ခံရသောသူတို့ကိုသူများထဲတွင် Jarnail Singh က Bhindranwale နှင့်အခြားစစ်သွေးကြွခဲ့ကြသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဆစ်ခ်၏နောက်ထပ်ဒေါသရန်, Akhal Takt ဆိုးဆိုးရွားရွားခွံနှင့်သေနတ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။
စစ်ဆင်ရေး Bluestar ၏နောက်ဆက်တွဲခုနှစ်, ဆစ်ခ်စစ်သားအတော်များများအိန္ဒိယကြည်းတပ်ကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ အချို့သောဒေသများရှိ, နှုတ်ထွက်သူတွေကိုနှင့်တပ်နေဆဲသစ္စာစောင့်သိသောသူတို့အားအကြားအမှန်တကယ်တိုက်ပွဲရှိခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာလ 31, 1984 တွင်, အင်ဒီယာဂန္ဒီဗြိတိသျှသတင်းစာဆရာနှင့်အင်တာဗျူးတွင်များအတွက်သူမ၏အရာရှိတဦးကနေအိမ်သို့နောက်ကွယ်ကဥယျာဉ်မှထွက်သွားလာ၏။ သူမကသူမ၏ဆစ်ခ်သက်တော်စောင့်နှစ်ခုလာတာနဲ့အမျှသူတို့ဝန်ဆောင်မှုလက်နက်များဆွဲငင်နဲ့မီးဖွင့်လှစ်။ Satwant Singh က self-တင်ရိုင်ဖယ်နှင့်အတူသုံးဆယ်ကြိမ်ပစ်ခတ်နေစဉ် Beant Singh ကတစ်ဦးပစ္စတိုနှင့်အတူသူမ၏သုံးကြိမ်ပစ်ခတ်။ နှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားထို့နောက်အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ၎င်းတို့၏လက်နက်များကျဆင်းသွားခြင်းနှင့်လက်နက်ချခဲ့သည်။
အင်ဒီယာဂန္ဒီခွဲစိတ်ကုသခံယူပြီးနောက်ကြောင့်မွန်းလွဲပိုင်းအနိစ္စရောက်လေ၏။ အကျယ်ချုပ်နေချိန်တွင် Beant Singh ကပစ်သတ်ခံခဲ့ရသည်; Satwant Singh နဲ့စွဲချက်တင်ပူးပေါင်းကြံစည် Kehar Singh ကနောက်ပိုင်းမှာဆွဲထားခဲ့ကြသည်။
ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့သေခြင်းသတင်းထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်အခါ, မြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယကိုဖြတ်ပြီးဟိန္ဒူ၏လူအုပ်တစ်ဦးသောင်းကျန်းသွားလေ၏။ လေးရက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော Anti-ဆစ်ခ်အဓိကရုဏ်း၌ဘယ်နေရာမှာမဆို 3000 ကနေဆစ်ခ်အသတ်ခံရ 20,000 ရန်, သူတို့ထဲကအတော်များများအသက်ရှင်လျက်မီးရှို့ကြ၏။ အဆိုပါအကြမ်းဖက်မှုများ Haryana ပြည်နယ်အတွက်အထူးသဖြင့်မကောင်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ အိန္ဒိယအစိုးရသည် pogrom တုံ့ပြန်ရန်နှေးကွေးခဲ့သောကြောင့်, ဆစ်ခ်ခွဲထွက်ရေး Khalistan လှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ခံသည့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုကိုအောက်ပါလအတွက်သိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ Iron Lady ဟာရှုပ်ထွေးမွေထားခဲ့လေ၏။ သူမသည်သူမ၏နျြသား, ရာဂျစ်ဂန္ဒီတို့ကဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ရုံးခန်းထဲမှာအရာ၌နန်းထိုင်ခဲ့သည်။ ယနေ့တိုင်အောင်, ကွန်ဂရက်ပါတီဒါနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ကနီပိုတစ်စန်၏စွဲချက်ကိုရှောင်ရှားမရနိုငျသောနေရူး / ဂန္ဒီမိသားစုနှင့်အတူဖော်ထုတ်နေသည် - ဤမင်းဆက်ဆက်ခံသူမ၏အမွေ၏အနုတ်လက္ခဏာသွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ အင်ဒီယာဂန္ဒီကိုလည်းပါဝါများအတွက်သူမ၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန်ဒီမိုကရေစီ warping, အိန္ဒိယ၏နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်များတွင်အာဏာရှင်စနစ်သွတ်သွင်းပေးခဲ့ကြတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, အင်ဒီရာရှင်းလင်းစွာသူမ၏တိုင်းပြည်ကိုချစ်ပြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့ဆွေမျိုးတစ်ဦးပိုမိုအားကောင်းအနေအထားထဲမှာစွန့်ခွာခဲ့တယျ။ သူမသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အဆင်းရဲဆုံး၏ဘဝတိုးတက်စေရန်ဆည်းကပ်ခြင်းနှင့်စက်မှုနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ ချိန်ခွင်လျှာတွင်, သို့သော်, အင်ဒီယာဂန္ဒီအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်သူမ၏နှစ်ခုစစ်မှုထမ်းကာလအတွင်းကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးပြုကြပြီပုံရသည်။
ပါဝါများတွင်အမျိုးသမီးများ၏ပိုမိုသိရှိလိုပါက၏ဤစာရင်းတွင်တွေ့မြင် ပြည်နယ်အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များ အာရှတိုက်မှာ။
Pericles ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ (ဂ။ 495-429 ဘီစီ)
Qin Shi Huang က၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ: တရုတ်၏ပထမဦးဆုံးဧကရာဇ်
တရုတ်နိုင်ငံ၏3အရှင်နှင့်5ဧကရာဇျ
ကို My လိုင်အသတ်ခံရမှုအဘယ်အရာခဲ့သလား
Arc ၏ဂျုံး: အမြော်အမြင်ခေါင်းဆောင်သို့မဟုတ်မကျန်းမမာရုပ်သေး?
Anakin Skywalker ဟာအမှောင်ဘေးထွက် Joined အဘယ်ကြောင့်အသက် 16 '' Star Wars '' Quotes ဖော်ပြ
Scott Weiland ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်ကိုယ်ရေးဖိုင်
အက်ဒွပ် II ကို
သင်ဟာတစ်ဦးကပုဂံ Group မှကို Join ခင်မှာမေးပါမှ6မေးခွန်းများ
Marist ကောလိပ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
Interactive စာဖတ်ခြင်းနှင့် Phonics Website များ
ဂျက် Nicklaus Quotes
ထိပ်တန်း5မက္ကဆီကန်လက်ဝှေ့သမား
အပြည့်အဝပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: အဆိုပါ 2008 ဆူဇူကီး Boulevard C109R နှင့် C109RT
အဆိုပါ Beatles သီချင်းများ: 'ငါ့ကိုသလား Love' '
Pascual Orozco ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲမှတစ်ဦးက Short လမ်းညွှန်
"ဟုအဆိုပါ Bandwagon အပေါ်ဤနေရာသို့သွားရန်!" ရွေးကောက်ပွဲအတွက်အသုံးပြုစကားထူး
အကောင်းဆုံး Jon နှင်း Quotes
ကာယဗလလေ့ကျင့်ခြင်းအတွက် Supersets ဘာတွေလဲ?